I-STUDIO SASEBHISHI YASE-ISANLILLA - I-Airbnb
I-STUDIO SASEBHISHI YASE-ISANLILLA
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sofia
I-studio esihle sabantu abashadile, esinendawo enhle kakhulu, kulayini wokuqala webhishi lase-Islantilla (Huelva), eduze ne-Mall of Islantilla, isikhungo lapho ingxenye enkulu yokungcebeleka kwale ndawo yokuvakasha yase-Huelva itholakala khona (izitolo, ama-cinemas, izindawo zokudlela, isitolo esikhulu). Indawo yokuhlala inekhishi, ikamelo lokulala, igumbi lokuphumula (konke egumbini elilodwa), indlu yokugezela kanye nethala lapho ungabona khona ulwandle.
Ikhishi elinakho konke, elinomshini wokugeza izitsha nomshini wokuwasha, ifriji, i-blender, i-ceramic hob, i-microwave, i-toaster, ibhodwe eliveziwe kanye nezitsha eziphelele. Inombhede ongu-150 cm onekhabethe elakhelwe ngaphakathi egumbini, kanye nombhede wosofa ongu-120 cm. Amanye amasevisi afana ne-32 "flat screen TV, umshini wokomisa izinwele ne-ayina netafula layo. Indlwana yokuhamba inganikezwa.
Ngebanga lemizuzu engu-5 ungajabulela amabhishi amahle ase-La Antilla nase-Islantilla. Bangamabhishi asedolobheni, anesihlabathi esihle segolide esinazo zonke izinsizakalo zokosa. Futhi basondelene kakhulu, emahlathini e-Isla Cristina, amabhishi ase-La Casita Azul nase-La Redondela. Umasipala ongumakhelwane waseCartaya ukunikeza i-Playa de El Rompido ehlukile kanye ne-Natural Area Marismas del Río ne-Piedras y Flecha del Rompido. Ngebanga elingaphansi kwehora ungavakashela idolobhana lase-Rocio, ne-hermitage yalo enhle; i-Doñana Park, lapho ungenza khona uhambo oluqondiswayo ku-4x4, ukugibela amahhashi emuva, uthole imvelo yayo ethokozisayo ezikhungweni zokuhumusha; ungazi izindawo zase-Colombia (i-Moguer, i-La Rábida ne-Palos de la Frontera), lapho ungavakashela khona i-Monastery engokomlando yase-La Rábida kanye ne-Muelle de Las Carabelas Museum.
Ungangena futhi ngaphakathi kwesifundazwe, uvakashele i-Sierra de Aracena ne-Picos de Aroche, lapho uzothokozelwa khona yizindawo ezinhle kanye nokudla okuconsisa amathe kwasezintabeni; i-Comarca de la Cuenca Minera de Riotinto, enomnyuziyamu wayo oyingqayizivele we-Migodi; i-Andévalo, lapho ungathenga khona eminye yemikhiqizo yayo yobuciko, efana namabhuzu avamile e-Valverde del Camino; i-County yase-Huelva, ekunikeza ithuba lokuvakashela enye yezindawo zayo zewayini lapho unganambitha khona futhi uthenge amawayini amahle okuvela kwayo.
Emakhilomitheni angu-25 kungumngcele wasePortugal.
Le ndawo inemisebenzi ehlukahlukene yokuzilibazisa: igalofu, imizila yokuqwala izintaba, imidlalo yamanzi (Isikole Sokuhamba Ngesikebhe), ukugibela amahhashi, izimoto, ama-cinemas, izitolo ezinkulu...
Ungakwazi futhi ukunambitha okukhethekile okunikezwa ugu lwase-Huelva, olusekelwe ezinhlanzi ezisanda kukhiwa nokudla kwasolwandle, emigoqweni eminingi nasezitolo zokudlela zase-La Antilla, e-Islantilla, itheku lase-Terrón nase-Isla Cristina.
Inombolo yepholisi: VFT/HU/0082